Kylian Mbappe oo u sheegay Kooxdiisa Paris Saint-Germain inuu doonaayo inuu tago… (Halkee ayuu ku sii jeedaa?) – Gool FM
Kylian Mbappe oo u sheegay Kooxdiisa Paris Saint-Germain inuu doonaayo inuu tago… (Halkee ayuu ku sii jeedaa?)
(Paris) 13 Sebt 2020. Xiddiga reer France ee ee Kylian Mbappé ayaa baaqi kusii ahaan doona hoggaaminta weerarka kooxda Paris Saint-Germain xilli ciyaareedkan 2020-21.
Laakiin weeraryahanka reer France ee Kylian Mbappé ayaa ka nixiyay maamulka kooxda Paris Saint-Germain, kaddib markii uu shaaca ka qaaday go’aankiisa la xiriira mustaqbalkiisa xagaaga dambe.
Inkastoo agaasimaha ciyaaraha kooxda Paris Saint-Germain ee Leonardo Araújo uu sameynayo dadaal kasta ee lagu gaarayo qaab isfaham ah si loo cusbooneysiiyo qandaraaska Kylian Mbappé ee PSG.
Laakiin Kylian Mbappé ayaa u muuqanin inuu go’aansaday inuu sidaas sameeyo, maadaama qorshayaashiisa mustaqbalku ay u muuqdaan meel ka baxsan garoonka Le Parc des.
21 jirkan ayaa heshiiskiisa kooxda Paris Saint-Germain wuxuu dhacayaa xagaaga 2022, xilli loo arko inuu bar-tilaameed buuxa u yahay kooxda Real Madrid, sidoo kale Liverpool ayaa lala xiriirinayaa adeega ciyaaryahankan.
Sida laga soo xigtay wargeyska “The Times” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Kylian Mbappé uu u sheegay maamulka PSG, inuu doonayo inuu ka tago kooxda dhamaadka xilli ciyaareedkaan, si uu u tijiaabiyo khibrad cusub oo meel kale ah.
Wargeyska ayaa tilmaamay in meesha xigta ee laacibka uu tagayo ay noqon doonto horyaalka La Liga ee dalka Spain, si uu u xirto maaliyada Real Madrid ama uu u dhaqaaqi karo horyaalka Premier League, si uu ugu biiro naadiga naadiga Liverpool.
Sidoo kale kooxaha saxiixiisa xiiseynaya waxaa ka mid ah labada kooxood ee ka wada dhisan Magaalada Manchester ee Man United iyo Man City si la mid ah naadiga reer Spain ee Barcelona.